नयाँ सरकार बन्यो भने जसपा र एमाले एक रहलान्? - हाम्रो देश
नयाँ सरकार बन्यो भने जसपा र एमाले एक रहलान्?
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ।
सत्ता समीकरणको खेल यसपालि निर्णायक मोडमा पुग्छ कि पुग्दैन अझै टुंगो छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन साँच्चै पहल गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा आगामी राजनीति धेरै निर्भर रहन्छ।
कांग्रेसले शनिबार निर्णय गरिसके पनि देउवाले सरकार बनाउने पहल गरेका छैनन्। बरू देउवाको सट्टा रामचन्द्र पौडेल तातेका छन्। सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गराउन पनि पौडेलले नै मुख्य भूमिका खेलेका थिए। आइतबार जसपाका नेता महन्थ ठाकुरलाई मनाउन पनि पौडेल नै उनको निवास पुगेका थिए।
कांग्रेसकै एक नेताले यसलाई ‘ताप्के नताती बिँड तातेको’ भनेर टिप्पणी गरे।
‘देउवालाई अझै पनि जसपाले एक भएर आफूलाई भोट दिन्छ भन्ने विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले उनी प्रधानमन्त्रीभन्दा कांग्रेसको आउने महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन चाहन्छन्।’
भारतले अहिले पनि ओलीलाई नै सत्तामा टिकाउन चाहेको र त्यहीअनुसार खेल भइरहेको उनले टिप्पणी गरे। ‘त्यसैले अहिले नै सरकार बनाउन देउवाले धेरै प्रयास गर्ने सम्भावना म कम देख्छु,’ उनले भने।
देउवाले सरकार बनाउन पहल गर्नेमा जसपाका एक नेता पनि शंका गर्छन्। ‘उहाँले चाहेको भए महन्थ ठाकुरसँग आफैं कुरा गर्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पौडेलजी किन अधि सर्नुपर्थ्यो!’
सत्ताको खेलमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवा निर्णायक देखिए पनि सरकार गिराउन वा नयाँ सरकार बनाउन अहिले न कांग्रेस निर्णायक हो न प्रधानमन्त्री ओली। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओली सरकार अल्पमतमा पर्छ। त्यसपछि उनको सरकार जोगाउने काम संसदको चौथो ठूलो पार्टी जनता समाजवादीले मात्र गर्न सक्छ।
ओलीसँग सत्ता गठबन्धनमा जाने वा उनको विकल्प खोज्ने भन्नेमा जनता समाजवादीभित्र तीव्र विवाद छ। जसपाका नेताहरू बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रूपमै ओलीलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। जसपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो भने ओलीसँग निरन्तर छलफलमा छन्।
जसपाभित्र पूर्व राजपाको ठूलो हिस्सा ओलीसँगै मिलेर सरकार बनाउने पक्षमा देखिएको छ। अहिलेको मुख्य प्रश्न सत्ता गठबन्धनको विषय टुंगिउञ्जेल जसपा पार्टी एक रहन्छ वा रहन्न भन्ने हो।
प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३२ सांसद छन्। थप दुई सांसद निलम्बित छन्। ३२ मध्ये १६ जना पूर्व संघीय समाजवादी र १६ जना राजपा पक्षका सांसद छन्।
दुवै पक्षका नेताले आफूहरूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेका छन्। ओलीसँग सत्ता गठबन्धन टुंगो लाग्यो भने बहुमत सांसदहरूले आफूहरूलाई साथ दिने पूर्व राजपा पक्षका नेता बताउँछन्।
‘त्यो अवस्थामा जसपाले एक भएर निर्णय गर्ने छ,’ उनले भने।
राजपा समूहकै महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव लगायत नेताहरू ओलीसँग सरकारमा जाने पक्षमा नरहेको पूर्व संघीय समाजवादी पक्षका नेताहरूको दाबी छ। ‘शरतसिंह भण्डारी पनि ओलीसँग भन्दा ओली इतर गठबन्धनकै पक्षमा हुनुहुन्छ,’ एक नेताले दाबी गरे।
दुवै पक्षका नेताको आ-आफ्नै दाबी रहे पनि कुन समूह बहुमतमा छ भन्ने अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। आफूहरूले चाहेको पक्षमा बहुमत पुग्न सक्ने देखिए पार्टी विभाजन गरेर भए पनि सत्ता गठबन्धन बनाउन दुवै पक्ष तयार रहेको एक नेताले बताए।
सत्तारुढ एमालेसँग अहिले १२१ जना सांसद छन्। जसपाबाट राजपा फुटेर १५/१६ जना मात्र सांसदको साथ पाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी जोगिन सक्छ। संसदमा तीन जना स्वतन्त्र सांसद छन्— जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन। राजपाको साथ पाए यी तीन सांसदलाई पनि आफूतिर तानेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार जोगाउन सक्छन्। प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद छन्। बहुमतका लागि १३८ सांसदको साथ चाहिन्छ।
तर त्यो अवस्थामा ओलीलाई एमालेभित्र माधव नेपाल समूहको पनि साथ हुन जरुरी छ। एमालेभित्रको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषाललाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले निलम्बन गरेपछि नेपाल-खनाल समूह आगो बनेको छ। उनीहरूले देशभर समानान्तर कमिटीहरू गठन गरेर ओलीविरूद्ध अभियान नै चलाउने निर्णय गरिसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा जसपा फुट्यो र ओलीसँग मिलेर उनको सत्ता जोगाउनेतिर लाग्यो भने एमालेको नेपाल-खनाल समूहले के निर्णय गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। ओली सत्तामा रहुञ्जेल आफूहरूमाथिको दमन जारी रहने नेपाल-खनाल समूहको निष्कर्ष छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट झार्नु उक्त समूहको प्राथामिकतामा देखिन्छ।
सत्ताबाट कसरी झार्ने भन्नेमा भने उक्त समूहभित्र पनि मतक्यै छैन। जसपा फुटेर ओलीलाई जोगाउनेतिर लाग्यो भने ‘फ्लोर क्रस’ गरेर भए पनि उनका विरूद्ध मत हाल्नुपर्ने पक्षमा कतिपय सांसद देखिन्छन्।
नेपाल-खनाल समूहमा कम्तिमा ३५ जना सांसद छन्।
‘कतिपय सांसद भने त्यो अवस्था नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन्,’ नेपाल-खनाल पक्षका एक नेताले भने, ‘कांग्रेस-माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाए सर्प मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने अवस्था हुन्थ्यो।’
जसपा फुटेर प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता जोगिने अवस्था आइपर्यो भने नेपाल-खनाल पक्षले ‘फ्लोर क्रस’ नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ती नेताले पनि स्वीकार गरे।
राजनीति यो मोडसम्म आइपुग्न अहिलेको अवस्थाबाट चलायमान भने हुनुपर्छ। चलायमान हुन कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गम्भीर प्रयत्न सुरू गर्नुपर्छ।
‘अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘हेर्दै जाऊँ, आउने दिनमा उनले के गर्छन्?’